UYIFAKA NJANI WINDOWS 10 UHLAZIYO LUKA-OKTHOBHA U-2020 USEBENZISA ISIXHOBO SENDALO SEMEDIA - WINDOWS 10
Uyifaka njani Windows 10 Uhlaziyo luka-Okthobha u-2020 usebenzisa isiXhobo seNdalo seMedia
IMicrosoft ikhutshwa ngokusemthethweni Windows 10 Uhlaziyo luka-Okthobha we-2020 Inguqulelo yama-20H2 yakhe wonke umntu. Olu luhlaziyo lwesibhozo olukhulu aluzisi kuphela ukulungiswa kwe-bug kunye neempawu ezintsha kodwa likwabonelela ngetoni yotshintsho phantsi kwe-hood kuwo wonke umntu kubandakanya abathengi, abadlali beqonga kunye nemibutho. Zonke izixhobo ezihambelana nokudityaniswa kwiseva yeMicrosoft zifumana ngokuzenzekelayo Windows 10 Inguqulelo 20H2 yesaziso sokuhlaziya inqaku. Ke jonga kwaye uqiniseke ukuba uphilile ilungiselelwe Windows 10 Uhlaziyo luka-Okthobha ka-2020 kwaye ulinde isaziso sokuphucula esiza.
Iziqulatho umboniso 1 Faka ngokwakho Windows 10 Inguqulelo 20H2 1.1 Nika windows hlaziya ukuzama ukufaka Windows 10 Inguqulelo 20H2 1.2 Ukuphucula Windows 10 Inguqulelo 20H2 usebenzisa isixhobo sokuyila iMedia
Ukuba ngenxa yaso nasiphi na isizathu awukafumani Windows 10 Okthobha 2020 Hlaziya okanye awunakulinda de iMicrosoft ifake ngokuzenzekelayo uhlaziyo. Ungayisebenzisa esemthethweni Windows 10 Inguqulelo ye-20H2 yeMedia isixhobo sokuhlaziya ngesandla ukuya Windows 10 Uhlaziyo luka-Okthobha u-2020.
Faka ngokwakho Windows 10 Inguqulelo 20H2
Okokuqala qiniseka ukuba awuzange kuhlehlisela windows uhlaziyo ukufaka.
windows 10 ukufumana uhlaziyo olunamathele ku-0
Jonga windows Ukuhlaziya kunye nokunxulumene kwayo (ii-BITs, Superfetch) iinkonzo ziqhutywa. Ukujonga nokuqala kwezi nkonzo zivula iinkonzo zeewindows
Cinezela iWindows + R, chwetheza iinkonzo.msc kwaye kulungile
Jonga ezi meko zenkonzo.
ukuba nayiphi na kwezi nkonzo ayisebenzi ngokungacofa kuyo kabini
tshintsha uhlobo lokuqalisa ngokuzenzekelayo kwaye uqalise inkonzo.
Nika windows hlaziya ukuzama ukufaka Windows 10 Inguqulelo 20H2
Nika ngokwakho uhlaziyo lweWindows kwaye vumela uhlaziyo lweWindows ukukhuphela ukuze luhlaziye.
Cinezela iWindows + I indlela emfutshane yokuvula usetyenziso lweeSeto,
cofa uHlaziyo kunye nokhuseleko, emva koko uhlaziyo lweWindows.
betha itshekhi kumaqhosha ohlaziyo kwaye uvumele iiwindows ukuba zijonge kwaye zifake uhlaziyo.
Ukuba ubona uhlaziyo oluthiwa 'Faka indawo kuhlaziyo Windows 10, uguqulelo 20H2', olu luHlaziyo luka-Okthobha u-2020 kwaye luya kuqala ukukhuphela kunye nokufaka.
Xa ugqibile ukukhuphela kunye nokwenza ufakelo lokuqala, iiWindows ziya kukukhuthaza ukuba uqalise ikhompyuter yakho.
Kwaye xa uqala ikhompyuter, iya kugqiba ukufakela kwaye ikubuyisele kwiWindows ngohlaziyo luka-Okthobha u-2020 olufakelweyo.
Ukuphucula Windows 10 Inguqulelo 20H2 usebenzisa isixhobo sokuyila iMedia
Ukuba ukujonga uhlaziyo lweWindows alubonisi uHlaziyo luka-Okthobha u-2020 ukuba luyafumaneka, emva koko masenze windows ukunyanzela ukuphuculwa kunye nokufakwa Iwindows 10 inguqulelo 20H2 usebenzisa izixhobo ezisemthethweni zokudala imithombo yeendaba.
Kwabo bangaqhelananga nesi sixhobo, isiXhobo seNdalo seMedia sinokusetyenziselwa ukuphucula esele ikho Windows 10 fakela okanye wenze i-bootable USB drive okanye ifayile ye-ISO, enokusetyenziselwa ukwenza iDVD enokuqalisa, onokuyisebenzisa ukuphucula i ikhompyuter eyahlukileyo.
Okokuqala Khuphela isixhobo sokwenza imithombo yeendaba kwiMicrosoft: http : //microsoft.com/en-us/software-download/windows10 Kwaye ugcine kwi-drive yakho yendawo.
Emva koko cofa ekunene kukhutshelwe MediaCreationTool20H2.exe fayile kwaye ukhethe Sebenzisa njengomlawuli Ukuqhuba usetyenziso.
Kwiskrini sokuqala, uya kubuliswa ngesivumelwano selayisensi ekufuneka uvume kuso ngaphambi kokuqhubeka.
Emva kokuba wamkele isivumelwano selayisensi, nceda ube nomonde ngelixa isixhobo 'silungisa izinto'.
Nje ukuba isifaki simisele, uya kucelwa ukuba wenze njalo Ukuphucula le PC ngoku okanye Yenza imithombo yeendaba kwenye iPC .
Ukhetho olungagqibekanga sele lukuhlaziyisiwe ke ngoku hit Okulandelayo .
Qaphela: Ukuba unqwenela ukuphucula iPC eyahlukileyo, kuya kufuneka ukhethe 'Yenza imithombo yeendaba yokufaka' kwaye ulandele inyathelo.
olu khetho alusafumaneki kuba ikhompyuter yakho iphuculwe ngaphezulu kweentsuku ezili-10 ezidlulileyo
Isixhobo seNdalo seNdalo siza kuqala ukukhuphela Windows 10 Uhlaziyo luka-Okthobha we-2020 kwaye ulifake.
Iya kuxhomekeka kwisantya sakho se-intanethi ukuba kuya kuthatha ixesha elingakanani ukugqiba inkqubo yokukhuphela.
Inkqubo ye Windows 10 yokukhuphela kunye nofakelo inokuthatha ixesha, ke nceda ube nomonde.
Ekugqibeleni, uyakufika kwiscreen esikukhuthaza ngolwazi okanye ukuqala kwakhona ikhompyuter.
Landela nje imiyalelo ekwiskrini kwaye xa igqityiwe,
iiwindows 10 version 20H2 ziya kufakwa kwikhompyuter yakho.
Kananjalo unokujonga iifestile zakho ezifakwe ngo-10 ngokucinezela windows + R, chwetheza winile kwaye oku Oku kuya kushukumisela isikrini njengomfanekiso ongezantsi.
Kuko konke, ukuvuyela ukuba uphucule ngempumelelo windows 10 Okthobha 2020 uhlaziyo Inguqulelo 20H2 kwiNkqubo yakho. Ukuba ujongene nabuphi na ubunzima ngelixa uphucula inkqubo okanye unawo nawuphi na umbuzo, ingcebiso malunga nesi sithuba zive ukhululekile ukuxoxa ngezimvo zingezantsi. Kwakhona, jonga
Windows 10 Inguqulelo ye-20H2, ngo-Okthobha u-2020 uhlaziyo Nazi izinto ezintsha ezizisiweyo
Buyela kuhlobo lwangaphambili lweWindows 10 Emva kweentsuku ezili-10
Isonjululwe: Hlaziya uphawu ku Windows 10 Inguqulelo 20H2 ayiphumelelanga ukufaka
Isonjululwe: Iseva ye-DNS ayiphenduli mpazamo kuyo Windows 10
jonga iiprofayili ze-facebook ngaphandle kweakhawunti
app hacker app for Android
ukugqwesa okungaphenduliyo yokugcina ifayile
uhlaziyo lwenqaku aluphumelelanga ukufakela
Kutheni iividiyo ze-youtube zingalayishwa